घट्न थाल्यो रेमिट्यान्स, ढुकुटीदेखि गोजीसम्म कस्तो पर्ला असर? :: Setopati
घट्न थाल्यो रेमिट्यान्स, ढुकुटीदेखि गोजीसम्म कस्तो पर्ला असर?
कमल नेपाल काठमाडौं,जेठ ५
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुले पठाउने मुद्रा(रेमिट्यान्स) घट्न थालेको छ। साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा ६ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले न्यून हो। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २० प्रतिशतले बढेको थियो।
अमेरिकी डलर बलियो हुँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रबाह ऋणात्मक भएको छ।
'उपभोग घट्छ हाम्रो उपभोग आयातमा आधारित भएकाले आयात घट्छ। आयातमा आधारित कर प्रणाली भएकाले सरकारले उठाउने कर पनि घट्छ। उपभोगकै आधारमा गरिबी मापण गर्ने भएकाले गरिबी पनि बढ्छ। अर्को भनेको रेमिट्यान्सका कारणले गर्दा अबका दिनमा विदेश जाने मान्छेहरु निरुत्साहित हुन्छन्' उनले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, ०६:०२:००
एनआइसी एशिया बैंकको १९ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत